समाचार पढ्ने गायिकाको ट्रेण्डिङ अनुभव « Janata Samachar
समाचार पढ्ने गायिकाको ट्रेण्डिङ अनुभव
काठमाडौं । नेपाल मानवीकी क्याम्पस (आरआर कलेज) बाट समाजशास्त्रमा एमए गरेकी ईश्वरी बरालले रेडियोमा समाचार वाचन गर्न थालेको ८ वर्ष पुगिसकेको छ ।
अहिले पनि उनी रेडियोकर्मीकै रुपमा कार्यरत छिन् राजधानीकै रेडियो थाहा सञ्चार एफएममा । तर यतिखेर भने उनको ट्रेन्डिङवाला गायिकाको परिचय थपिएको छ । अर्थात उनको स्वर रहेको नरिसाउन होई गीत केही साता अघिसम्म युट्युव ट्रेण्डिङमा रह्यो । उनले संगीतकार तथा गायक मिस्टर आरजेसँग गायनमा साझेदारी गरेकी हुन् । प्रस्तुत छ समाचारवालीबाट ट्रेन्डिङवाली गायिका बन्दाको ईश्वरीको अनुभव :
हरेक दिन समाचार तयार पारेर पढिरहेको मान्छे, एक्कासी ट्रेण्डिङमा परेकी गायिका बन्न पाउँदा कस्तो महसुस भएको छ ?
समाचार लेखन र बाचन मेरो पेशा हो भने संगीत र गायन रुची । पत्रकारिता र अध्ययन बाहेकको मेरो सवै समय मैले गीत संगीतको साधानमा खर्चिएको छु । नरिसाउन होई गीत टे«ण्डिङमा पर्दा मलाई खासै नौलो र अनौठो लागेको छैन । गीत टे«ण्डिङमा पारेर भाइरल बन्नु भन्दा पनि संगीत बुझेर साधना गर्नु मेरो रहर हो जुन म प्रयासरत छु ।
एकातिर संगीतको बजार छैन,भएका पनि खुम्चिए भनिरहेको अवस्थामा निकै महँगो भिडियो बनाउनुभएको छ । किन ?
गीत र भिडियो बनाउने अवसर पाएकोले बनाएको हुँ । यसमा खास ठूलो कारण छैन ।
अहिले त गीत सुन्ने भन्दा हेर्ने बढी भैसकेको छ । तपाईको गीत पनि भिडियोका कलाकारका कारण बढी चर्चामा आएको हो ?
हुनसक्छ । तर यो गीतले चर्चा बटुल्यो भन्नु भन्दा पनि दर्शक स्रोताले रुचाइदिनुभयो भन्न चाहन्छु म चाहिं । शव्द, संगीत , स्वर र समयको माग अनुसारको भिडियो बनेका कारण दर्शकले रुचाईदिनुभयो , माया गरिदिनुभयो ।
श्रोता,दर्शकबाट कस्तो फिडब्याक आइरहेको छ ?
मिश्रीत प्रतिक्रिया आएका छन् । केहिले राम्रो छ भन्नुभएको छ । संगीत बुझेकाहरुले सुधार्नुपर्ने ठाउँहरु देखाएर सुझाव दिनुभएको छ । मेहनत गरे व्यवसायिक गायिका बन्न सक्छ्यौ भन्ने शुभेच्छुकहरु पनि हुनुहुन्छ ।
गायन सौख मात्र हो कि लक्ष्य पनि हो ?
म गायनलाई सौख र लक्ष्यमा मात्रै सिमित राख्न चाहदिन । मलाई लाग्छ गायन मेरो जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ । तर व्यवसायिक हिसावले बजारमा गीत ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अवसर जुर्दा गर्नेछु ।
संगीतको औपचारिक प्रशिक्षण लिनुभएको छ ?
छु । असनमा रहेको गान्धर्व संगीत विद्यालयमा चन्दन श्रेष्ठ गुरुसँग संगीत सिकिरहेको छु । तर गीत भने म बोल्न जान्ने भएदेखि नै गाउन थालेको थिए ।
समाचार स्टुडियो र गीत रेकर्डिङ स्टुडियो दुवैको पहिलो अनुभव कस्तो थियो ?
मैले रेडियो पत्रकारिताको सुरुवात विक्रम संक्रम २०६९ सालमा इमेज एफ एमबाट गरेको हुँ । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस बागबजारमा बि ए पढ्दै गर्दा इमेज एफ एममा काम सिक्न गएको थिए ।
पत्रकारिताको विद्यार्थी भएका कारण यसको केहि सैद्धान्तिक ज्ञान थियो । रेडियोमा बोल्ने रहर त्यो भन्दा धेरै थियो । नेपालको विग मिडिया हाउस र बरिष्ठ पत्रकार दाइ दिदीको बिचमा बसेर काम गर्नुपर्दा सुरुमा नर्भस भएको थिए ।
सुरुको दिन एकजना सिनियर दाइसँग न्यूज पढ्न स्टुडियो छिर्दा डरले काँपेको जस्तो महसुस गरेको थिएँ । अनुहार पनि रातो र असिनपसिन भएको थियो । त्यो दिन डरैडरले समाचार पढेँर सके,स्टुडियो बाहिर निस्किदा बहोस हुन्छु कि जस्तो भएको थियो ।
बागबजारको एउटा इन्स्टिच्युटमा वाचनकलाको तालिममा फस्र्ट भएर रेडियोमा काम सिक्न गएको भएपनि मलाई सुरुमा गाह्रो भयो । समाचार वाचनमा मात्रै नभई लेखनमा पनि त्यस्तै अप्ठेरो भएको थियो । म काम सिक्न रहर गर्थेँ । बिस्तारै डर पनि हराउन थाल्यो र काम पनि सिक्दै जान थालँे । अहिलेसम्म आइपुग्दा मलाई मेरो पेशाप्रति गौरव लाग्छ ।
मैले पहिलो गीत विक्रम सम्वत २०७१ सालमा रेकर्ड गराएकी हुँ । डाक्टर कृष्णहरि बरालको शब्द र गैरे सुरेशको संगीतमा रहेको उक्त गीत पुतलीसडकको ए वान स्टुडियोमा रेकर्ड गराएकी थिएँ ।
गीत गाउन बराल अंकलसँगै स्टुडियोमा गएको थिएँ । पहिलो गीत रेकर्ड गर्दा म नर्भस भएको थिएँ । रेडियो र गीत रेकर्डिङको स्टुडियोमा के फरक हुन्छ होला भन्ने जिज्ञासा पनि मैले त्यहि गीत रेकर्ड गर्दा पूरा गरेँ ।
त्यहिवेला म स्टुडियोमा खुब चासो दिएर हेर्ने, घुम्ने गरेको थिएँ । त्यो कुरा मलाई अहिले पनि बराल अंकलले बेला–बेला सम्झाईरहनुहुन्छ , रमाईलो लाग्छ ।